SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:မီးဖိုချောင်အအေးခံဘုံဘိုင်,စီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ,ခေါက်သိမ်းနိုင်သောမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ,မူလစာမျက်နှာမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > မီးဖိုချောင်ရောနှောထိပုတ်ပါ > အေးမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ
အေးမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မီးဖိုချောင်အအေးခံဘုံဘိုင်, စီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ခေါက်သိမ်းနိုင်သောမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Cold Faucet ကို Chrome Brass Body ဖြင့်နစ်မြုပ်ပါ
ကြေးဝါခရုမ်းအပြီးသတ်မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ် Cold Faucet
ကြေးဝါ Chrome မီးဖိုချောင်တစ်ခုတည်း Lever Cold Tap
ကော်လံအမျိုးအစားမီးဖိုချောင်အတွက် Single Hole Cold Faucet
မီးဖိုချောင် Cold Faucet 360 ဆုံလည် Single Lever
Wall Mounted မီးဖိုချောင်တိုင်အအေးမိထိပုတ်ပါ
တစ်ပေါက်တည်းသောကြေးဝါ Chrome မီးဖိုချောင်ထဲကိုဝင်ပါ
စီးပွားရေးအဏ္ဏဝါအမျိုးအစားမီးဖိုချောင်ကြေးဝါလူပျို Cold Faucet
လူပျို Cold ကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet
Cold Kitchen Faucet ကြေးဝါကုန်းပတ်
faucet လက္ကားလုပ်ရန်သင်သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုကြည့်ရှုရန် Kaiping faucet ထုတ်လုပ်သူ Handy Sanitary Ware သို့လာရမည် ပိုက်အခြေစိုက်စခန်းရှိ Kaiping faucet ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်။ အဆိုပါ faucet အမှတ်တံဆိပ် Handy သန့်ရှင်းရေး Ware Guangdong ပြည်နယ်၊ Kaiping City, Heshan, China ၏ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း -...
အကယ်၍ Cold Kitchen Sink Taps သည်ပုံမှန်ရေဖိအားအောက်တွင်ရှိပါကရေစီးဆင်းမှုသည်ပိုမိုသေးငယ်လာသည်။ faucet ကိုမသန့်ရှင်းပြီးနောက် faucet ၏အတွင်းပိုင်းကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုထည့်သွင်းပါ။ Single-hole Cold Kitchen Tap; တစ်ခုတည်းလက်ကိုင်ကြေးဝါမီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင်တစ်ခုတည်းအအေးအဆို့ရှင် core ကိုဒီဇိုင်း; Class A စံ...
မဏ္Pိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းလီဗာမီးဖိုချောင်အအေးမိထိပုတ် လူပျိုလီဗာကုန်းပတ်တပ်ဆင်ထား မီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ , တစ်ခုတည်းအအေးအမျိုးအစား။ ပိုက်လှည့် ကော်လံအမျိုးအစား Cold Kitchen Taps များသည်ပန်းကန်တစ်ခု (သို့) နှစ်ဆမီးဖိုချောင်စုပ်စက်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်။ ပြားချပ်ချပ်တစ်ခုတည်း၊ ကြေးဝါကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်...
မီးဖိုချောင် faucets ရေအေး faucets နှင့်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှော Taps သို့ခွဲခြားထားတယ်။ မီးဖိုချောင်ရေကန်နှင့်ရေပိုက်များမှာရှုပ်ထွေးပါသည်။ အကယ်၍ ရေအေးကိုတပ်ဆင်ပြီးပါက Angle Seat Valve တစ်ခုလိုအပ်ပြီးပူပြင်းမှုအတွက်ထောင့်အဆို့ရှင်နှစ်ခုနှင့်ရေပိုက်နှစ်ခုလိုအပ်သည်။ အ သာပုတ်ပါ။ အကယ်၍...
Cold Kitchen Taps ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်မီးဖိုချောင် Faucets ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေအစွန်းများကိုမျက်နှာသုတ်ပုဝါနှင့်သုတ်ပါ။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာမီးဖိုချောင်သုံးပုတ်များက၎င်းကိုမှန်မှန်သန့်ရှင်း။ ဆေးကြောပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် Home Kitchen Taps များကိုခဲယဉ်းသောပစ္စည်းများဖြင့်မထိပါနှင့်။ မီးဖိုချောင်အအေးခံသည့်ပစ္စည်း -...
ကြေးဝါခရုမ်းအပြီးသတ်မီးဖိုချောင်နစ်မြုပ် Cold Faucet နေရာလေးကိုရဲ့လူပျိုအေးမီးဖိုချောင်ကိုအသာပုတ် s ကိုကြေးဝါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကိုဖန်ဆင်းအင်ဒိုနီးရှားစသည်တို့ကိုမီးဖိုချောင်ကြေးဝါကိုလူပျိုအေးမဏ္ဏိုင်ပုတ့်, လျှပ်စစ်ပြား 8 မှ 12 မိုက်ခရွန်ထူချေးနှင့်ရာတွင်ခုခံတွန်းလှန်, မလေးရှား, စင်္ကာပူ,...
ကြေးဝါ Chrome မီးဖိုချောင်တစ်ခုတည်း Lever Cold Tap နေရာလေးကိုရဲ့အေးသောကြေးဝါမီးဖိုချောင်ကိုအသာပုတ့်, etc အင်ဒိုနီးရှား, မလေးရှား, ဖိလစ်ပိုင်ဘရူနိုင်း, ဖီဂျီ, ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို, ဆာဗေးဒေါတူသောအဆိုပါကို C hrome ကို C ဟောင်းမီးဖိုချောင်ကိုအသာပုတ် s ကိုအပူပိုင်းဒေသများတွင်နိုင်ငံများအတွက်အသင့်လျော်မှာ chrome finish...
ကော်လံအမျိုးအစားမီးဖိုချောင်အတွက် Single Hole Cold Faucet Handy ၏ခေတ်မီ မီးဖိုချောင်သုံးတစ်ခေါက်အအေးခံ စက်များ၊ ထွက်ပေါက်ပိုက်သည် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်၊ မီးဖိုချောင်စုပ်ခွက်တလုံး၊ တစ်ခုတည်းသောလက်ကိုင်လည်ပတ်မှု၊ ကြေးဝါကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်းသည် အအေးခံမီးဖိုချောင်...
မီးဖိုချောင် faucets အိမ်မှာအလွန်အရေးကြီးသောအနေအထားရှိသည်။ လျှင်ကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet ၏မျက်နှာပြင် သံချေးခြင်းသို့မဟုတ်ယိုစိမ့်ခြင်း၊ ကြေးဝါမီးဖိုချောင်ဘုံဘိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ထိန်းသိမ်းကြသနည်း။ အဆိုပါ faucet ကြပါစို့ ထုတ်လုပ်သူကသင့်ကိုပြောပါမယ် - Cold Kitchen Sink Taps ကို ၀ ယ်ပြီးတဲ့အခါ၊ သူက professional...
Wall Mounted မီးဖိုချောင်တိုင်အအေးမိထိပုတ်ပါ တစ်ခုတည်းသောအအေးခံကာ မီးဖိုချောင်တိုင်ထိပုတ်ပါ ၊ ထွက်ပေါက်ပိုက်သည် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်၊ ပန်းကန်တစ်ခု (သို့) နှစ်အိုးမီးဖိုချောင်စုပ်စက်အတွက်သင့်လျော်သည်။ လက်ကိုင်လည်ပတ်မှု၊ ကြေးဝါကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်းသည် မီးဖိုချောင်စုပ်စက်...
Cold Kitchen Taps ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်သည့်အခါအင်အားအလွန်အကျွံမသုံးပါနှင့်၊ ခလုတ်ကိုသာဖွင့်ပြီးပါ ညင်ညင်သာသာပိတ်ပါ။ switch ကိုအလွန်အကျွံမတင်းတင်းမတင်းကျပ်ရ။ ၎င်းသည်ရေယိုစိမ့်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ရုံသာမက ဒါပေမယ့်လည်းတံဆိပ်ခတ်အဆို့ရှင်ပျက်စီးစေခြင်းနှင့်မလုံလောက်တံဆိပ်ခတ်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။...
စီးပွားရေးအဏ္ဏဝါအမျိုးအစားမီးဖိုချောင်ကြေးဝါလူပျို Cold Faucet Handy ၏ မီးဖိုချောင်သုံးဆုံလည် Single Pillar ဘုံဘိုင် သည်ကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးခရိုမီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ကိုင်လည်ပတ်မှုနှင့်အအေးခန်းအလည်ဒီဇိုင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထွက်ပေါက်ပိုက် 360 °ဆုံလည်နိုင်ပါတယ်, bubbler...
ဥပမာအားဖြင့်အောက်ပါမီးဖိုချောင်ရေယာဉ်များဖြစ်သော Cold Kitchen Sink Taps သည်မိခင်များကိုလက်ဆေး။ ရေခပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ သင်၏ဘဝသည်ယခုတွင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်ဟုမခံစားမိပါနှင့်။ သာမန်မှပျော်စရာရှာရန်၊ နေ့စဉ်သင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းသောခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းရန်၊ Handy faucet ထုတ်လုပ်သူကသင့်အားနေ့စဉ်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်ကိုလိုလားသည်။...
ကြေးဝါခရုမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Gooseneck Cold Kitchen Sink Taps Handy ` s မီးဖိုချောင် တစ်ခေါက် အအေးခံတိုင်များ ၊ ကုန်းပတ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ Outlet ပိုက်သည် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်ပြီး၊ အိုးတစ်လုံးသို့မဟုတ်နှစ်ချက်ဖလားမီးဖိုချောင်တွင်ရေစုပ်နိုင်သည်။ ထုထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ကိုင်လည်ပတ်မှု၊...
ငါ့ကိုပထမ ဦး ဆုံးကြေးဝါမီးဖိုချောင် Faucet ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြောင်းပြောပါရစေ! တကယ်တော့ဘဝမှာကြေးဝါမီးဖိုချောင်ဘုံကိုနေရာများစွာမှာသုံးဖို့လိုတယ်။ နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမီးဖိုချောင်ထိပုတ် ရန်အတွက် Handy ရေချိုးခန်းကိုနေ့တိုင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဆေးကြော ခြင်း၊ အ...
တရုတ်နိုင်ငံ အေးမီးဖိုချောင်ထိပုတ်ပါ ပေးသွင်း
အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘရူနိုင်း၊ ဖီဂျီ၊ ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို၊ ဆာဗေးဒေါစသည်တို့သည်အပူပိုင်းဒေသရှိနိုင်ငံများအတွက်သင့်တော်သောစီးပွားရေးမီးဖိုချောင်ရေပိုက်စုပ်စက်ဖြစ်သည်။ ထွက်ပေါက်ပိုက် 360 °လှည့်နိုင်ပါတယ်, bubbler ထွက်ပေါက်ရေပိုပြီးသွက်လောင်းနှင့်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ တင်သွင်းသောကြွေအဆို့ရှင်အမာခံကိုလက်ခံပြီးနောက် ၅ နှစ်အတွင်းအာမခံချက်ယိုစိမ့်မှုမရှိပါ။